दसैँमा राजधानीबाट घर जाँदै हुनुहुन्छ?... :: कमल नेपाल :: Setopati
दसैँमा राजधानीबाट घर जाँदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ बसको भाडादर
दसैँका लागि पर्सि मंगलबारदेखि यातायात व्यवसायीहरुले अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुला गर्ने भएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागसँग सहमति भएपश्चात उनीहरु अग्रिम बस टिकट बुकिङ खुलाउन सकारात्मक भएका हुन्। सहमतिअनुसार व्यवसायीले अब बसमा छत राख्न पाउने छन्, तर राखिएको छतमा यात्रुका सामान मात्रै राख्न पाइने छ भने यात्रु राख्न पाइने छैन। यदी यात्रु राखेको पाइएमा इजाजत नै खारेज हुनेसम्मका कारबाही हुने भएको छ।
पुरानै भाडादरमा यात्रुहरु घर जान पाउने भएका छन्। छठ पर्वअघि भाडा समायोजन नगरिने भएपछि यात्रुहरु पुरानै भाडादरमा घर जान पाउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
‘छठ पर्वअघि भाडा समायोजन हुँदैन, त्यसपछि समायोजन हुँदा भाडा घट्न पनि सक्छ र बढ्न पनि सक्छ’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने। तोकिएभन्दा बढी भाडा नदिन उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरे। यसअघि बस भाडा समायोजनका लागि अध्ययन गर्न भनेर एक समिति गठन भएको थियो।
समितिले इन्धनको मूल्य पार्टपूर्जा तथा लुब्रिकेन्टको मूल्य, सवारी साधनको मूल्य तथा मूल्यह्रास, स्टाफको खर्च लगायतका विषयलाई अध्ययन गरी हालको भाडामा समायोजन गर्नेगरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने छ।
तर समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाएको विभागका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। अहिलेको भाडा वैज्ञानिक नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीले वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ‘सबै कुराको अध्ययन गरेपछि नयाँ भाडादर कायम गर्नु जरुरी छ, वारम्बार व्यवसायीलाई झुक्याउने काम हुनु भएन’ उनले भने। आफूहरु भाडा समायोजन गर्दा घट्ने भएमा घटाउन तयार भएको र बढ्ने भएमा बढाउनुपर्ने उनले बताए।
चाडपर्वअघि भने पुरानै भाडादरमा यात्रु घर जान पाउने सिटौलाले बताए। ‘चाडपर्वअघि यात्रुहरुले पुरानै भाडादरमा घर जान सक्नुहुन्छ, सवारीसाधनको प्रकारअनुसारका भाडादर यसअघि नै तोकिएको छ, तोकिएभन्दा कसैले बढी भाडादर नतिर्नुहोला’ सिटौलाले सुझाव दिए।
चाडपर्वपछि भने भाडादर वैज्ञानिक रुपमा समायोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
यस्तो छ विभिन्न ठाउँहरुको दुरी र डिलक्स बसको बस भाडादर
प्रकाशित मिति: आईतबार, भदौ २५, २०७४, १२:१५:३९